Salad na nshịkọ osisi, tomato na cheese
Anyị na-enye gị nchịkọta anụcha na nke mbụ na nshịkọ osisi, tomato ọhụrụ na cheese. Ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya mma nke okpokoro ọ bụla, ọ ga-abụkwa na ndị ọbịa gị ga-echeta ya.
Salad na nshịkọ osisi, tomato, àkwá na cheese
Nshịkọ ejiri - 400 g;
Ọka ụtọ mkpọ - 100 g;
àkwá - 5 PC.
Ugwu nke green onions - 10 g;
Mayonezi olive - 3 tbsp. ngwunye;
Ya mere, a na-asacha tomato ahụ, anyị na-eme obere mbepụ site n'elu ma belata akwụkwọ nri maka sekọnd 10 na mmiri mmiri. Mgbe ahụ, anyị dị jụụ, wepụ tomato site na akpụkpọ ahụ ma wepụ obere iberibe. A na-esite na ngwugwu ahụ ma na-ede akwụkwọ na grater. Àkwá na-esi ike, dị ọcha na igwu, kwa, na grater. Achịcha siri ike na-egbu nri dị ka nke ọma, ma na-ehichapụ elu, na-ehichapụ ma na-egbutu ya na nma. Ugbu a, anyị na-akwadebe ihe mgbakwasa maka salad: anyị na-ehicha garlic, gbanye ya site na pịa na piallet ma jikọta ya na Mayonezi, na-esi ya na-esi ísì ụtọ. Anyị na-etinye ihe niile a na-etinye n'ime nnukwu efere salad, wụsa ihe oriri na mix. Anyị na-eje ozi salad dị njikere na tomato, garlic, cheese na ọka, gbasaa na akụkụ nke keram.
Salad sabo na tomato, cheese na garlic
nshịkọ dị - 200 g;
ibe - 1 mkpọ;
Mayonezi - nụrụ ụtọ.
A na-esite na ngwugwu ahụ wepụta mkpịsị osisi, bee n'ime cubes ma tinye ya na ala nke efere salad. Mgbe ahụ, ehichapụ ya na Mayonezi ma gwakọta garlic site na pịa. A na-asacha tomato, na-ekpuchi ya na mmiri esi mmiri, na-ekpuchi ya, na-ekpochapu ya na obere mkpụrụ ma na-ekesa ihe na-esonụ. Àkwá na-esi ike sie, kpochara ma gụchaa ya na nnukwu efere. Na-agbasapụ na Mayonezi ma na-agbaji ibe gị agbajiri. Chiiz na-ekpuchi nwa nwa ya ma gbasaa oyi akwa ikpeazụ, na-emecha salad nke ahịhịa, ahịhịa na cheese.
Salad sabo na tomato ma gbazee chiiz
nshịkọ dị - 1 mkpọ;
cheese cheese - 1 ibe;
Osisi na-ewepu nkeji iri, ma dị jụụ, ndị dị ọcha na ndị na-eme ka mmiri ghara ịdị. A na-emepụ osisi ndị na-egwu egwu, wepụ ya na ngwugwu ahụ ma kpaa ya gburugburu. A na-ebipụ ndị na-acha akwụkwọ nri na ndị a na-eji mmiri fused na cubes. Mgbe nke ahụ gasị, jikọta ihe niile dị na efere salad, gbakwunye ihe ụtọ iji sie ụtọ, oge na Mayonezi na mix.
Bombs na tomato
Buckwheat porridge n'ime oven
Nri na mmanụ aṅụ
Pancakes na mushrooms
Salad na tuna na tomato
Nsi site na onye mmuta
Egwuregwu ndị na-acha ọkụ
Teethers maka ezé
Julienne na mushrooms - uzommeputa
Ọbara mgbali elu - mgbaàmà
Uwe akwa uwe ogologo
Cindy Crawford n'oge ọ bụ nwata
Top 10 kachasị arụ ọrụ
Oge Na-eme Nchekwa
Ịṅụ mmanya n'ụlọ
Jam si piich
Celery - uru bara uru maka akwalata
Nwa ahụ na-ede ihe
Chiiz ice cream
Nri jam "Pyatiminutka" - Ntụziaka